Koper, Marina Koper ဆိပ်ကမ်း - Koper
ဥရောပ ဆလိုဗေးနီး ပုံကားမောင်းသူ
Koper ၏ port ကို
နေရပ်လိပ်စာ: Kopališkonabrežje 5, 6000 Koper - Capodistria, ဆလိုဗေးနီး;
ဖုန်းနံပါတ်: +386 5662 61 00;
hours: မွန် - Sat. 08:00 ကနေ 16:00, ယာမှ 08:00 ကနေ 15:00 ဖြစ်သည်။
Koper ဆိပ်ကမ်း - ပင်မပင်လယ်တံခါးတို့ လိုဗေးနီးယား၏ တစ်ဦးတက်ကြွကုန်သွယ်မှုကောက်ယူထားတဲ့မှတဆင့်။ ဒါကြောင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဘာသာစကား Venetian သမ္မတနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးကြိမ်ကြောင့်ဒါဟာအစကအဓိကခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းဧရိယာတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်, သငျသညျသမိုငျး၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသက်သေခံတော်မူချက်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Trieste နှင့် Rijeka - Koper ဆိပ်ကမ်းဥရောပမှာနှစ်ခုအဓိကဆိပ်ကမ်းအကြားတည်ရှိသည်။ ဒါဟာ XI ရာစုအစဦးပတ်ပတ်လည်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်, ဤနေ့လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဆိပ်ကမ်း7မီတာ 18,7 မှအနက်နဲ့အတူ 23 အိပ်စင်ကိုထောက်ပံ့ပေးရာ 4737 m²၏ဧရိယာ, ဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါဆိပ်ကမ်းကို 11 အထူးပြုဆိပ်ကမ်းလည်ပတ်ပေမယ့် 11 000 m²၏ဧရိယာသိမ်းပိုက်ပြီးသော back-up မှာလည်းရှိပါတယ်။
Koper ဆိပ်ကမ်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက် - သစ်ကို Piers အဟောင်း elongated ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်မှကုန်တင်ကိုင်တွယ်တိုး၏စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်။ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏နယ်မြေတွင်, အရည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုများအတွက်ဓာတ်လှေကားနှင့်ကွန်တိန်နာသိုလှောင်ရုံများနှင့်ပွင့်လင်းသိုလှောင်မှုအာကာသဖုံးလွှမ်းကြ၏။ Koper များ၏ဆိပ်ကမ်းကိုအီကွေဒေါ, ကိုလံဘီယာ, ကနေအသီးကဲ့သို့သောကုန်စည်များမှာ ဣသရေလအမျိုးသည် နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကော်ဖီ, သီးနှံ။ သူကတောင်အရှေ့အလယ်ပိုင်း, ဂျပန်နှင့်ကိုရီးယားထံမှသင်္ဘောများရောက်ရှိလာ။ ဒါဟာခရီးသွားဧည့်အီတလီနှင့်ခရိုအေးရှားရနိုင်သည့်မှတဆင့်ကောင်းကောင်းနှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Koper ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ Venetian- အသမ္မတနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းအခါလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Habsburg ဘုရင်စနစ်ဒေသတွင်းလွှမ်းသည့်အခါသူသည်သြစတြီးယားဧကရာဇ် port ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ Trieste နှင့် Rijeka ၏အနီးအနားဆိပ်ကမ်းများအခမဲ့ကြေငြာခဲ့သည်သည်အထိအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက်ဆိပ်ကမ်းမှတဆင့်ဒီကုန်သွယ်မှု Koper ၏ က၎င်း၏အခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ကာလ 1954 ခုနှစ်တွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီများအပေါ်လန်ဒန်စာချွန်လွှာမှာပြေလည်ကြပြီမဟုတ်သည်အထိတဖြည်းဖြည်းချသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ပျင်းရိဆိပ်ကမ်းကိုစဉ်အတွင်းခိုင်မာတဲ့ကျဆင်း လာ. ဒါကြောင့်ဆိပ်ကမ်း recover လုပ်ဖို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုယူခဲ့ပါတယ်။ အထိ 270 000 တန်ချိန် 1962 Koper bandwidth ကိုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ဆိပ်ကမ်းလိုဗေးနီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်အရေးပါသောဆက်သွယ်ထားသောအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ခရီးသွားဧည့်နှင့်အတူခရုဇ်သင်္ဘောများ Moore ။ ဆိပ်ကမ်းအဆင်ပြေနှစ်ခုနီးစပ်, တည်ရှိသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ။ အီတလီလေဆိပ် Ronchi - Portorožလေဆိပ်ကနေ 14 ကီလိုမီတာနှင့် 40 ကီလိုမီတာမှာ။
ဆိပ်ကမ်း Koper ခေတ်သစ်နည်းပညာကိုတပ်ဆင်ထားနှင့်အဓိက command ကိုအလယ်ဗဟိုကနေထိန်းချုပ်သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်အညီတပ်ဆင်ထားပြီး။ Koper မှဧည့်သည်များ, ဆိပ်ကမ်းတဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သင်္ဘောကိုကြည့်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနွေရာသီရာသီကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းကြသည် cruises တက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်သေချာပါစေ။
Koper များ၏ဆိပ်ကမ်းအရဒေသခံဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထားဘူတာရုံမှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိပ်ကမ်းကနေသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကို 1.5 ကီလိုမီတာရှိလိမ့်မည်။
Banja လောနိတျမွို့ - ဆွဲဆောင်မှုများ
သဘာဝပန်းခြံ Vrelo Bosne
ကယ်ဆယ်ရေး - လိပ်ခေါင်းကနေဖယောင်းတိုင်
Reese Witherspoon နှင့်ဂျော်ဒန် Weingartner လိုဂို shared မဟုတ်ပါဘူး
San Pedro များ၏အကျဉ်းထောင်
Autoimmune hemolytic သွေးအားနည်းရောဂါ
အိမ်ထောင်မှာ Pisces အသုံးပြုပုံများနှင့် Pisces